Allgedo.com » Maamulka Dowlada ee Gobolka Bakool oo sheegay in ay la wareegi doonaan Deegaanada Alshabaab ay kaga sugan yihiin Gobolkaasi
Maamulka Dowlada ee Gobolka Bakool oo sheegay in ay la wareegi doonaan Deegaanada Alshabaab ay kaga sugan yihiin Gobolkaasi
Masuuliyiinta Dowladda Soomaaliya ee Gobalka Bakool ayaa shaaca ka qaaday inay wadaan qorshayaal ay Shabaab kaga qabsan rabaan deegaano ka tirsan Gobalka Bakool.
Guddoomiyaha Gobalka Bakool Maxamed Macalin ayaa sheegay in Shabaab deegaano dhowr ah ciidanka Dowlada ka qabsadeen iminkana ay wadaan qorshayaal kale oo ku aadan inay kala sii wareegaan deegaano kale.
Wuxuu sheegay in Shabaab dhexdooda uu ka jiro khilaaf xoogan taasi oo usahleysa inay kala wareegaan deegaano ay iminka gacanta ku hayaan,isaga oo sheegay in bisha soo socota gudaheeda ay kala wareegayaan deegaano badan sida uu sheegay.
Maxamed Macalin ayaa sheegay in Shabaab aysan iminka laheyn awood badan oo ku aadan dhanka dagaalada sidoo kalena ay kala wareegayaan deegaano badan.
Wuxuu sheegay inay Dowladda Soomaaliya ka sugayaan garab dhawaana ay qaadi doonaan weeraro Shabaab ay kagala wareegayaan deegaano muhiim ah.
Al-Shabaab iyo ciidanka Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ku dagaalamaan deegaano iyo Degmooyin ka tirsan Gobalada dalka Soomaaliya.